Alarobia, Septambra 23, 2015 Talata, Septambra 22, 2015 Lara Albert
Raha ny fampihenana ny volan'ny mpanjifa, ny fahalalana dia hery indrindra raha amin'ny endrika fahitana fihetsika manankarena. Amin'ny maha mpivarotra antsika dia manao izay rehetra azontsika atao izahay hahatakarana ny fihetsiky ny mpanjifa sy ny antony ialan'izy ireo, mba hahafahantsika misoroka izany. Fa ny matetika mahazo ny mpivarotra dia ny fanazavana churn fa tsy vinavinan'ny loza mety hitranga. Ka ahoana no ahatonga anao manoloana ny olana? Ahoana no haminavanao an'iza
Mpivarotra sy fianarana milina: haingana, mahomby, mahomby kokoa
Alarobia, Aprily 17, 2013 Saturday, May 16, 2015 Lara Albert
Nandritra ny am-polony taona maro, ny fitsapana A / B dia nampiasain'ny mpivarotra hamaritana ny fahombiazan'ny tolotra amin'ny fiakaran'ny vidin'ny valiny. Ireo mpivarotra dia manolotra kinova roa (A sy B), mandrefy ny tahan'ny valiny, mamaritra ny mpandresy ary avy eo manolotra an'io tolotra io ho an'ny rehetra. Saingy, aleo hatrehana izany. Ity fomba fiasa ity dia miadana, mandreraka ary tsy mety miala tsiny - indrindra rehefa ampiharinao amin'ny finday io. Ny tena ilain'ny mpivarotra finday dia fomba iray hamaritana ny tolotra mety
Hahatakatra. Mahaiza marika. Manangana fahatokisana.
Alatsinainy, Jolay 27, 2009 Alakamisy, Septambra 19, 2013
Na dia mety milay kokoa aza ny tetika ara-barotra amin'ny Internet noho ny dokam-barotra fanontana taloha mankaleo, io fihenan-kery io dia tsy mampiala anao amin'ny fanaovana asa marika fototra. Ny touchpoint rehetra dia fotoana voalohany hanatsarana ny fitiavanao marika amin'ireo mpihaino kendrenao. Fantaro ny fomba ampiasan'ilay olona amin'ny lafiny hafa an'io resaka teknolojia nomerika io. Amin'ny ambaratonga firy izy no misokatra amin'ny fiaraha-miasa aminao amin'ity resaka ity? Raha sahirana izy manamarina ny mailaka mandritra